FALANQEYN: Maxay ka dhigan tahay eegashada Madaxda DFS ee khatarta Al- Shabaabka sida deg deg ah u kobcaysa iyo Dagaal la’aanta? – Puntlandtimes
FALANQEYN: Maxay ka dhigan tahay eegashada Madaxda DFS ee khatarta Al- Shabaabka sida deg deg ah u kobcaysa iyo Dagaal la’aanta?
June 6, 2018 W LAASCAANO
BAYDHABO(P-TIMES)- Hogaamiyaasha dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa indhaha ka qarsanaya weeraradii ugu badnaa oo ay AL- Shabaab qaadeen tan iyo bilowgii bisha May, kuwaas oo ay ku weerareen magaalooyin kala duwan oo ay kusugnaayeen ciidamada dawladda Faderaalka iyo kuwa dawlad gobaleedyada dalka, waxaana ilaa hadda la diwaangaliyey in ka badan 11 weerar oo dhamaantood isku sifo loo adeegsaday iyo isku waqti.
Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa horey ugu dhawaaqay October 2017 in ay qaadayaan weeraro ay Al- Shabaab uga saarayaan gudaha dalka, Madaxweyne Farmaajo oo ay doorteen baarlamaanka Faderaalkuna wuxuu cadeeyey in halka sanno ee ugu horeysay xukunkiisa uu Al- Shabaab ka saarayo dalka, uuna kordhinayo weerarada lagu hayo kooxahaas.
Iskadaa in la kordhiyee dawladda Faderaalku waxay gudaha Muqdisho iyo hareeraheeda kusoo koobtay ciidamadii ku jiray furimaha dagaalka ee difaacayay caasumada, taasi waxay abuurtay in jidadka Afgooye & Balcad oo min 30 KM u jira caasumada ay noqdaan kuwa aan lagu safri Karin.
Jowhar & Muqdisho, haddii aad ku safrayso waxaa u baahan tahay duulimaad diyaaradeed oo ay adag tahay in aad hesho, taas waxay muujinaysaa welwelka xagga amaanka ah iyo dayacnaanta ay sameysay dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Saraakiil aad ula socda arrimaha ammaanka ayaa sheegaya in ay Dawladda Faderaalku dib u soo celisay ciidamadii kusugnaa deegaanada fog-fog ee gobalada dalka, gaar ahaana labada Shabelle oo ay dib ugu celisay magaalooyinka waa weyn, taas waa su’aalaha ilaa hadda jawaab loo la’ayahay.
Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya oo dhawaan safar ku tagay xerada ciidan ee Bali-Doogle oo ay gacanta ku hayso dawladda Mareykanku, wuxuu ku dhiiran waayay in uu safarka dhinaca dhulka ah maro, masaafo ahaana aad bey u yar tahay inta ay isku jiraan Muqdisho & Bali-Doogle laakiin amaankii ayaan gabi ahaanba jirin.
Madaxda dawladda Faderaalku waxay mashquul kunoqdeen sidii ay markale kuraasta ugu soo laaban lahaayen iyo xasarado siyaasadeed, kuwaas oo hadda halis weyn ay ka dhalatay, ka dib markii bishii May ay Al- Shabaab muujjiyeen cududa ay dib iskugu abaabuleen ee ay kuqabsanayaan inta badan deegaanada ay kusugan yihiin ciidamada taabacsan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Siyaasiinta falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa rumeysan in haddii aan si deg deg ah wax looga qaban fiditaanka iyo awoodeysiga Al- Shabaab ay adkaan karto in markale laga guuleysto, waxayna hubanti la’aan galinayaan weerarada sii kordhaya ee kooxdan iyo weeraradii lagu hayey oo laga baajiyey.
Dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo inta badan lagu tiriyo in ay ahayd midii qaaday howlgaladii ugu waa weynaa ee Al- Shabaab awoodooda hoos loogu dhigay ayaa xooga saaraysay sidii magaalooyinka waa weyn iyo kuwa muhiimka ahba loogu bartilmaameedsado AL- Shabaab, haddan kooxdu wey sii waday qaraxyada iyo dilalka qorsheysan oo ay hadda ka dhigtay ay casriyeysay.
Ku mashquulida Siyaasadda ee madaxda dawladda Faderaalka ayaa Al- Shabaab siisay fursad ay kaga faa’iideystaan dib u dhiskooda, waxayna hadda u muuqdaan cudud xoog leh oo ay ku fulin karaan weeraro ay ku qadaan saldhigyada ciidamada dawladda, iyagoo hadda qaaday in ka badan 10 weerar oo ay ku qaadeen Saldhigyo ciidan oo kuyaala Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle & gobalka Banaadir, taasi waxay muujisay in ay ka badan yihin sidii ay ahaayeen markii uu xukunka dalka la wareegay Madaxweyne Farmaajo.
Taabagalinta qorshaha Ammaanka Qaranka iyo siyaasadda oo laga fogeeyo ciidamada ayaa noqon kara gundhiga kaliya ee Al- Shabaab looga guuleysan karro, waxaana looga fadhiyaa Madaxda dawladda Faderaalku in ay dadajiyaan qorshe kasta oo guluf colaadeed ah si looga guulesto kooxahan ka hor dhamaadka sannadkan, oo ay Soomaalidu doonayso in ay 2020-ka qabsato doorasho xor iyo xalaal ah.